Barcelona oo u weecaneysa Griezmann hadii uu tago Neymar – Gool FM
Barcelona oo u weecaneysa Griezmann hadii uu tago Neymar
Kaafi July 29, 2017
(Catalonia) 29 Luulyo 2017. Hadii ay soo gaba gabowdo sheekadda is suuqa haysata ee u dhaxeysa Barcelona iyo Paris Saint – Germain ee ku saabsan Neymar, Catalans waxa ay u weecan doontaa Antoine Griezmann.
Iyada oo ay da’diisu tahay 26, hadana qiimaha lagu bur burin karo xeyn-daab qandaraaskiisa waa 100 million euros waxaana kahor joogsaday in uu ka tago Atletico Madrid xanibaaddii FIFA suuqa uga soo rogtay Rojiblancos.
Sida laga soo xiganayo MARCA, kooxda ku dheesha Camp Nou waxaa u qoran liis ay dooneyso in ay badal u noqdaan Brazilian-ka waxaana ka mida dhaliyihii hore ee Real Sociedad.
Waxaa Barca u riixaya Grienzmann qiimaha lagu helo karo oo iminka suuqa kala iibsiga ka ah waaqici iyada oo ay la socoto qiimaha ay ku iibineyso Neymar.
26kii goo lee uu dhammaan tartamada u dhaliyey Atleti ayaa ka dhigaya Griezmann xiddiggooda aan muranka la galin Karin.
Pique: "Neymar wax uu yeelo magaranayo".
''Weli koox aan la heshiiyay ma jirto'' - Leon Goretzka oo inkiray inuu Bayern ku biirayo! (Milan & Juve oo sidoo kale doonaya)